परदेशीको पिडा : आफन्तको सम्झना मनमै खुम्चाएर राख्नुपर्दो रहेछ - Sagarmatha TV Sagarmatha TV
परदेशीको पिडा : आफन्तको सम्झना मनमै खुम्चाएर राख्नुपर्दो रहेछ
१९ कार्तिक २०७८, शुक्रबार १९:१५
कुनैदिन सोच्ने गर्थे परदेश भन्नि कस्तो होला,?के त्यहाँ जान पाए साच्चिकै जिन्दगी बन्छ र ? के त्यहाँ पैसा फल्नि बोट हुन्छ र ? यस्तै सोचाइले मन सधै भारि हुन्थ्यो । म पनि राम्रो मान्छे बन्थे होला त्यहाँ गएत गाउँ परिवारको हाइ- हाइ बनिन्थ्यो होला एकमा अनेकौं सोच पालेर बस्थे।
गाउँले दाजु भाइ परदेशबाट आउदाँ को छाँटकाँट,, फु गरेपनि ढल्नि जस्ता मान्छे, हेर्दा नचिनिनि भएर आउँदा लोभिएको मेरो मनले एक पटक मात्रै जाने सोचाइ लिएर एक सुनौलो सपना बोकि यो जिबनको अनौठो यात्रा गर्न पनि बेर लागेनछ ।
यो जिबनले पनि कहिले कोल्टो फेरेछ खै थाहै भएन, गरिबि जिबनलाइ उकास्ने सुरमा अचानक परदेशि जिबन जिउँदा पो थाहा पाए। संसार को लिला के हो भन्नि, बास्तबिकताको दुँनिया कस्तो रैछ भन्नि । हो सपनाको परदेश र बिपनाको परदेश एकदम भिन्न लाग्यो मलाइ जो मैले सोच्ने गर्थे, अनि राम्रा राम्रा सपना बुन्ने गर्थे उ बेला ।
बुढा हजुरबुबाआमा हरु भन्नु हुन्थो” कित परेकाले जान्दछन कित पढेकाले साच्चैनै यो शब्दले मेरो मनको एक छेउ लिएको छ अनि यस्तै यस्तै कुरा मनभरि अनेक कुरा खेलाउदै जिबन जिउन बाध्य भैरहेको छु यो टन्टालापुरे घाम र अनि यो मरुभुमिको तातो हावामा ।
बिपनाको परदेशको कुरा गर्नु पर्दा मत यो दुनियालाइ बेग्लै ठान्दछु, यहाँ त बाउ खाँदो रैछ पेट भरि छोरो हेर्छ भोकले बाउले खाँको टुलुटुलु, अनि छोरो खाँदा बाउले हेर्नुपर्ने टुलुटुलु कति अजिव जस्तो छ यहाँको दुनिँया ।
कोहि कसैको कुरो सुन्ने फुर्सदनै हुदैन । सबै आफ्नो आफ्नो धुनमा,, छोरो मरेको पनि थाहा छैन बाउ बिमार भएको पनि थाह छैन, एकसुरे जस्तो जिवन रैछ, मलाई त कता कता लाग्छ, जस्तो सुकै दुःख कष्ट भएपनि आफ्नै गाँऊ ठाँउनै ठिक रहेछ।
जे भएपनि आफ्नै गाँउमा एकअर्का प्रती माया र ममता प्रसस्त छ । गाँउ घरकाले सोच्दा होलान, ल लफलानाको छोरी कमाउनि भो, के सम्झिन्थ्यो । पैसा को पछाडि लागेपछि के आफ्ना के पराइ सबै तोड्दा रैछन भन्दा होलान । तर आफु नमरि स्वर्ग देखिदैन भन्छन ति घरमै बसेका बुबाआमा हरुलाइ के थाहा? परदेशको हालत, यहाँको परिपाटि । हो उनि हरुको सोचाइ पनि म गलत सोच्दिन ठिक हो, तर गाउँ परिबार आफ्नाको सम्झना त कसलाई पो आउँदैन र? तर पनि बाध्यतामा कुन्ठिनुपर्दोरहेछ।
त्यो गाउँघर आफन्तको सम्झना मनमै खुम्चाएर राख्नुपर्दो रैछ। यहाँ, माया ममतालाइ भूल्नु पर्दो रैछ यहाँ, काम नगरि सुखै नहुनि भो आज स्वास्थ्य लाई ठिक छैन भोलि गरमला काम भन्न नपाइनि, जति दुःख भएपनि मरिमेट्नै पर्नि उफ यो कस्तो दुनियाँ हो ? बिरामि पर्दा तातो पानि पनि तताएर दिनि मान्छे नहुदाँ मन त यति त रुदैन, सकि नसकि आफुले नै गर्न पर्ने ।
आफुले नबाले चुलो बल्दैन । ला आज तलाइ सन्चो छैन म बनाइ दिन्छु खाना त सुत भन्नि मान्छे त कहाँ हो कहाँ ओइ कस्तो छ भनेर बोलाउने मान्छे समेत हुदैनन् । अनि यहि देशका मान्छेको परदेशिहरुलाइ हेर्ने नजर पनि अलग हुदो रैछ, कोहो? कोहो? जस्तो गर्नि, जति लडारिएर मडारिएर बसेपनि यहाँका मान्छे सँग परदेशि परदेशि नै हुदो रैछ।
आखिर एक्लै दुइ पैसा कमाइ केहि गरौला भन्नि सोच पनि परदेश को हावाले त्यतिकै उडाइदिदो रैछ। बुढेसकालको साहरा होलान छोराछोरि भन्दा बाउआमा सँगै सहारा माग्नि अवस्थामा भको म परदेशि लाइ देख्दछु ।
हरपल गाँउ परिबार को यादले मन छटपटाइरहदा कति खेर जाम जस्तो हुनि यो मन, सधै सधै यो उडेर गाउकै सपना मा बिलिन हुन्छ । बाआमा कस्तो हुनुहुन्छ होला? काका काकि को के खबर छ होला ? पल्लाघरे दाइभाइ, उपल्लो घरकि हजुरआमा ,, बहिनिहरु, कस्ता होलान के गर्दै होला ? फलानो के गर्दै होला फलानि के गर्दै होलि ? गाँउमा नयाँ के हुदै छ होला ? यस्तै यस्तै कुराहरु यँहाका दिन काट्ने साथिहरु हुदा रैछन ।
मन किन हो किन एकोहोरिरहन्छ । जे भएपनि काम त गर्नै पर्ने काम नगरि खान कहाँ पाइन्छर ? जे पर्दा पनि लादिन पर्छ यहाँ,उफ कहिले काहि त मनमा बेदनाको गाँठो परेर आउँछ यहाँको चलन देख्दा,, धेरै चोटि रोएको पनि थिए। बाबुआमाको यादमा तर रोएको पनि सुनिदिने कस्ले आँखाको आँशु आँखैमा सुकाउनु पर्ने आमा भनेर बोलाउन मन लाग्दा बोलाउन पाइएन ।
यहाँ ,, जस्तो दुख पिडा भएपनि परिवारको काखमा रामाउन कसलाई मन छैनर, यो दुनिया स्वार्थि भनौ कि के भनौ, जे गरे पनि राम्रो हुदैनहुने बाध्यता त मजबुरिले गर्दा बिरानो मुलुकतिर पाइला नचालि नहुने, उहि पैसा को कारण सबैथोक त्यागि पराइ घर सिघार्न पर्ने, किन हो किन यो दुनियाले पैसालाइ नै ठुलो देखेको होला सोच्छ तर के गर्ने जता जाउ त्यहि उद पैसा यो बिना कुनै सम्भव छैन।
अब जस्तो सुकै होस जति दुःख गर्न परेपनि आफ्नै गाउँलाई सजाउन मन छ । तर मन भएर के गर्नि धनलाई अगाडि नलगिन्जेल सम्म केहि नहुनि उफ एक मन त भो मत जान्छु परदेश भन्नि यस्तै रैछ भन्नि सोच्छु फेरि एकछिन पछि मन बदलिन्छ भो जानु हुदैन, घर गएर पनि केहि गर्न सकिएन भने मेरो एक्लो जिबन त जहाँ गएर भए पनि काटौला तर घर परिवार पनि हेर्न पर्यो नि भन्नि सोचाइले खिचेर फेरि यहिको दुनियाँमा रमाउने कोसिस गर्ने सोच्छु तर मनले मान्दैन ।
परदेशीन हतार गर्ने सबैलाई म यो भन्न चाहन्छुकि ढिडो रोटी जस्तो भएपनि घरकै खाउ, दुःख जति परेपनि परिबार सँगै बाड्दै जिउने काम गरौँ तर परदेश जानि दुई पैसा कमाउनि सोचाई लाई बदलौ मान्छेको जातलाइ जति भएपनि थोरैनै हुन्छ त्यसैले मनमा सन्तुष्ट , धैर्य लाई कहिल्यै नतोडम । बरु भगवान सँग प्रार्थाना गरौ कि भगबान अहिले जस्तो जिन्दगी जिउँदै रहेको छू ।उस्तै सँधै भइरहोस यहाँ भन्दा तल जान नपरोस र यहाँ भन्दा माथि पनि नलगिदेउ भनौ यो लोभको घैटोमा जति पानि हालेपनि भरिदैन ।
घरी घरी घोच्छन मलाई ती सपनाका अजिङ्गरहरुले अनि झसङ्ग हुँदै त्यो सपनाको खाल बाट बाहिर निसकन्छु । बिवशता र बाध्यता सँगको साइनो कस्ने प्रयास गर्दागर्दै बित्छ्न मेरा केही दिनहरु । मरुभूमि बाट एक चिहान मात्रै देख्छु म जहाँ म जस्तै हजारौं नेपालीका सपनाहरु जलिरहेका छन् । त्यही सपनाबाट केही परको संसारमा आफुलाई एक्लो सम्झिदै फेरि बिपनाको संसार सँग सम्झौता गर्न विवश छु ।
बरु आफ्नै गाँउमै केहि ब्यवसाय गरेर बाचौँ सोचाइ परिवर्तन गरौँ ,नयाँ योजना बनाएर बनाम घरदेशमै जीवन बितौँ। तर पैसाको आशमा परदेशलाइ नरोजौँ ! बस साथि बस यहि हो यो म मात्रै होइन सबै परदेशिको यथार्थ ब्यथा हो। परदेशिको काे पीडा काहानी बन्दै छ दिनप्रति नेपालीहरुले आफ्नो देश छोडेर अरू काे देश मा आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले होला?
लेखक : सपना न्यौपाने ,हाल – युएई
भारतमा विदेशबाट आएकालाइ एक हप्ता क्वारेन्टाइन अनिवार्य
सान्जेन र रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणकार्य चाँडो सक्न प्राधिकरणको ताकेता
२०८ जना कोरोना संक्रमितको आईसीयू र भेन्टिलेटरमा उपचार गरिदै
प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा र भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहबीच भेट
नेपाली विषयमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थीलाई लोकनाथ–विष्णुमाया स्मृति पुरस्कार
काठमाडौं उपत्यकामा २९५ जनामा संक्रमण पुष्टि
आफैंले चलाइरहेको ट्याक्टरबाट खसेर मृत्यु